Waterfalls v igwe igwe: Echiche nke njikwa ngwaahịa | Martech Zone
Waterfalls vs. igwe igwe: Echiche nke njikwa ngwaahịa
Sunday, Eprel 8, 2007 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Onwuka Onyeka tinye ọnụ na kediegwu ngosi n'ihi na IA Summit:
FYI: IA = Nhazi ihe omuma, UCD = Ọrụ echekwara Design
Maka ndị njikwa ngwaahịa sọftụwia ndị ahụ, echere m na nke a bụ ngosipụta dị egwu na usoro dị ukwuu maka mmepe ngwaahịa ngwanrọ. Anyị na-na na mgba na nsụda mmiri obibia m ọrụ na-Transition a obibia - ọ bụ ezie na anyị na mgbe n'ezie mata ya dị ka a "Machinesa Machine" obibia.
Ihe ngosi mmịfe a dị mfe ma zie ezi. Nsogbu nke mmiri mmiri ahụ dị egwu… a na-eduzi mmiri, enweghị ike ịkwụsị ya, na-agagharị n'otu ụzọ. Maghị ụdị ọgbaghara ị ga-enwe na ala ọdịda!
PS: Ahụrụ m usoro post-it / foto nke ngosi ahụ mma! Dị nnọọ iche!
Tags: ụlọ ọrụ ọmụmaleisa reicheltnjikwa ngwaahịammepe ngwaahịa softwaremmiri mmiri
Ikiri kọmputa m
WordPress NiceAdmin ngwa mgbakwunye Version 1.0.0 wepụtara